Sujet Malagasy – série A, session 2004 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar - Sujets et corrigés du baccalauréat 2020 à Madagascar
Sujets et corrigés du baccalauréat 2020 à Madagascar Malagasy Série A Sujet Malagasy – série A, session 2004 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar
Sujet Malagasy – série A, session 2004 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar
Laza Adina I: Fanontaniana
1. Milaza lafin-javatra telo mampiseho ny maha-kanto ny tononkalo.
2. Inona no atao hoe anjara amin’ny foto-pisainana Malagasy? Inona avy ny karazany raha ny loharano nipoirany no jerena?
Laza Adina II: Isafidianana ny A sy ny B.
Misy fombam-pitenenana manao hoe: “Aza mimenomenona amin’ny anjara fa tsy olombelona no tompon’ny lahatra”. Fakafakao sy tsikerao izany.
B. Fanadihadiana lahatsoratra
“Ny mpanoratra dia mpanabe sy mpamianatra; noho izany, tompon’andraikitra amin’ny fanolokoloana ny sain’ny Malagasy izy. Koa mampahatsiahy azy ireo izahay hoe: efa mba voafaritrao poeta, ianao mpanoratra ve ny sakafon-tsaina natolotra ny Malagasy? Mba efa nojerenao akaiky ve ity toe-tsaina vangavanga iainan’ny Malagasy ankehitriny ity? Anananao andraikitra izany.
Zava-bahiny tsy antonona ny toe-batany no nasainao nateliny ka nakarary ny ambavavafony, ianao anefa tsy mety hitrandraka zava-Malagasy mampangetaheta azy.
Impiry ianao no mieritseritra fa ny tsy fahaizana mandanjalanja avy aminao no mety mamorika ny sain’ny Malagasy izay efa miharatsy rahateo?
Ianao poeta, ianao mpanoratra, lalana mankaiza no hirahinao ny sain’ny Malagasy? Ianao no mpitari-dalana ka tsy ny fanafoanana izay efa tsara akory ny fanagasiana, fa ny fanandratana izay maha Malagasy eo amin’ny toerana avo …”
RANOE, Fifandraisana Sekoly FJKM no2 – Fihavanana.
Tag : Malagasy , Série A